မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကောင်းမွန်သော စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုကို ၂၅ နှစ်ကျော် ထိန်းသိမ်းလာနိုင်ခဲ့သည်အားလျော်စွာ Siemens Myanmar သည် ၎င်း၏ ရည်မှန်းချက် မျှော်မှန်းချက်များအတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် ရေရှည် ယုံကြည် စိတ်ချရသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပါသည်။
၂၅ နှစ်ကျော်ကာလ တစ်လျှောက်လုံးတွင် Siemens Myanmar သည် နည်းပညာအရည်အသွေးကောင်းမွန်မှု၊ စွန့်ဦးတီထွင်မှု၊ အရည်အသွေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုများအတွက် ရပ်တည်လာခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ electrification,automation နှင့် digitalizationနည်းပညာများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရေးပါသော လိုအပ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် တည်တံ့သော စွမ်းအင်၊ နည်းပညာ အခြေခံ၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။ ကုမ္ပဏီ နှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများသည် ကုမ္ပဏီ၏အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသာ မျှော်လင့်ကြောင်း သေချာပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု့တွင် ထောက်ပန့်ပေးခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခင်ကတည်းက ယနေ့တိုင် စက်ရုံ အလုပ်ရုံ နယ်ပယ်များ၊ ကျန်းမာရေး ဆေးဝါးဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဖြန့်ချိမှုဆိုင်ရာ စနစ်များတွင် Siemens ၏ ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ စနစ်များကို အသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။ စက်ရုံ အလုပ်ရုံများ၊ စားသောက်ကုန်များ၊ ဘိလပ်မြေစက်ရုံများအပြင် ကရိန်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုလည်း တပ်ဆင်ထောက်ပံ့လျက်ရှိပြီး အရည်အသွေး၌ သာလွန်ကောင်းမွန်သည်ကိုလည်း ထောက်ခံမှု ရရှိထားပါသည်။ Siemens အဆင့်မြင့် နည်းပညာသည် သုံးစွဲသူများနှင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော လူထုအသိုက်အဝန်းအား တန်ဖိုး တိုးတက်စေပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုတို့သည် နိုင်ငံတော်၏ တိုးပွားလာသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်မှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့၏ auto နှင့် digital စနစ်များသည် ကုန်ထုတ်လုတ်မှုအခန်းကဏ္ဍအတွက် အပြောင်းအလဲကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးကုသမှု ကိရိယာများမှာမူ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအတွက် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ဆေးဝါကုသမှု အကူအညီကို ပေးစွမ်းနိုင် ပါသည်။ Siemens Myanmar သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ရေရှည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဖြစ်နှင့် နိုင်ငံတော်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မည်ဖြစ်သည်။ အမြင့်ဆုံး စီးပွားရေးကျင့်ဝတ်ဖြင့် အကောင်းဆုံး ဆောင်ရွက်နိုင်မှု ရရှိစေရေးအတွက် ကျွန်တော်တို့၏ မျှော်မှန်းချက်၊ ရည်မှန်းချက်များကို နေ့စဉ် စီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်မှုကိစ္စများတွင် ပေါင်းစပ်ကျင့်သုံးပါသည်။
Siemens Limited Yangon ရုံးခွဲ
ယူနစ် ၆၊ ၁၅ လွှာ၊ မြန်မာစင်တာ ရုံးခန်းတာဝါ - ၁၊
အမှတ် ၁၉၂၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊
ဖုန်း: (+95) 1 9345 128
Head of Business Development, Digital Factory & Process Industries and Drives
အရောင်းမန်နေဂျာ၊ ဓာတ်အား စီမံခန့်ခွဲရေး
ကမ္ဘာ့တလွှား Siemens စီမံခန့်ခွဲမှု
Siemens အထက်ပိုင်း စီမံခန့်ခွဲရေး
တောက်ပသော အနာဂတ်တံခါး သော့ဖွင့်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တောက်ပသော အနာဂတ်ခရီးမှာ ခြေလှမ်းစခါစ အချိန်သာရှိသေးသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ ရည်မှန်းချက်မှာ ဤတောက်ပသော အနာဂတ်အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွင် လိုအပ်သော တွန်းအားများ ဖြစ်သည့် စွမ်းအင်နှင့် စွန့်ဦးတီထွင်မှုများကို သုံးစွဲသူများအား ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည့် ရေရှည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဖြစ်ရန် ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို လက်တွဲပြီး ကျွန်တော်တို့သည် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဝေမှုစနစ်၊ အော်တိုမေးရှင်းနည်းပညာ နှင့် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်များကို ဖန်တီးခြင်းဖြင့် အနာဂတ်အတွက် လျှောက်လမ်းကို ဖြောင့်မတ် ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ရိုးရှင်းသော ပစ္စည်းကိရိယာများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းထက် မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် တွန်းအားပေးသည့် အခန်းကဏ္ဍပေါင်းစုံတွင် အများထက်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော နည်း စနစ် များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ - ပီတာ ဘရူဒါ၊ အထွေထွေမန်နေဂျာ
ပီတာ ဘရူဒါ၊ , အထွေထွေ မန်နေဂျာ
ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ဒေသခံ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် ကျွန်တော်တို့ အောင်မြင်မှု၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ပင်ဖြစ်သည်။ Siemens လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် သုံးစွဲသူများအတွက် လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ နှင့် နည်းနာများကို လက်လှမ်းရယူစေနိုင်သည်။ သုံးစွဲ သူများအား စတော့နှင့် ထုတ်ကုန်များ၏ လမ်းညွှန်မှုများ ကို လွယ်ကူစွာ ဝယ် ယူရရှိ စေနိုင်ပါသည်။ Siemens ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များသည် သုံးစွဲသူများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အရည်အသွေးကို အမြင့်ဆုံး ယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။
Myanma Power Spectrum Co Ltd
Min Htoo Co. / Gold Power
Arkathit Enterprise Co.
Synopsis Technology Co. Ltd.
Cosmos Novel Tech Co Ltd
AtoZ Automation Co Ltd
United National Oil&Gas Trading Co.,Ltd.(IGE)
Inginn New Trading Co.,Ltd.
Aerospace Automotive Manufacturing Battery Manufacturing Chemical Industry Cement industry Cranes Data Centers Food & Beverage Glass Industry Machinery and Plant Construction Mining industry Municipalities and DSOs Oil & Gas Panel Building Pharmaceutical Industry Transportation and Logistics Water Industry
Siemens Burmese © Siemens 1996 - 2021